I-Krishna's Terrace:IStudioRK kunye neTerrace-BGLR yaseMzantsi
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSangeeth
Ibekwe phezu kweendawo zokuhlala eziphambili zaseMazantsi eBangalore kwaye zizele ziivenkile, ithala leKrishna liqinisekile ukuba liya kukunika indawo yokuphefumla efanelekileyo.
Isango letempile yakudala, inqaba kumgama, iKrishnalila Park-ISKCON ezayo, iKanakapura Road, itempile yakudala yaseVasantavallabharaya, ebuyela emva kubukhosi beChola, ibuyisela umphefumlo ngaphakathi kuwe.
Qaphela: Izinyuko ezimxinwa ezijikelezayo zinokuvavanya izakhono zakho zokuqina. Ngena ngesango elikhulu lokungena
Sifuna ukuba wazi ukuba senza indima yethu kuyo
nceda iindwendwe zethu zika-Airbnb zihlale zikhuselekile ngokucoca kunye
ukubulala iintsholongwane kwiindawo eziphathwa rhoqo (ukukhanya
iiswitshi, amaqhosha engcango, iziphatho zekhabhathi, iirimothi, njl.njl.)
phambi kokuba ungene.
Konwabele ukuhlala kwakho!
4.90 · Izimvo eziyi-87
Umbuki zindwendwe ngu- Sangeeth
Sihlala kanye ngezantsi kwesithuba kwaye ke siziva sikhululekile ukunxibelelana okanye ukungena ukuba ufuna nantoni na.
P.S :) Hlala nathi ubuncinci inyanga enye kwaye ufumane isaphulelo se-50% sokuphinda uhlale